Sheekh Ibrahin, oo Loo Aqoonsaday Aabaha Nabada Degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden] – Rasaasa News
Sheekh Ibrahin, oo Loo Aqoonsaday Aabaha Nabada Degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden]
Jun 29, 2011 oo Loo Aqoonsaday Aabaha Nabada Degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden], Sheekh Ibrahin Maxamed Xuseen
Sheekh Ibrahin Maxamed Xuseen, oo ah gudoomiyaha ururka UWSLF, ayaa waxaa loo aqoonsaday Aabaha nabada degaanka Somalida Ethiopia, ka dib kolkii uu soo afjaray colaadii ka jirtay degaanka Somalida Ethiopia mudo 17 sano ah.
Nabadu ma aha wax aaad jeclaan lahayd, nabadu waa wax aad samayso oo ficil u baahan, waana wax aad adigu leedahay qaalina ah oo aad bixiso.
Malahayga Sheekh Ibrahin Maxamed Xuseen, waa ninka ugu geesisan taariikhda cusub ee gabalka Ogaden, waana hogaamiye dhab ah.
Somalidu geesinimada waxay u taqaan ninka dagaal yahanka ah, haday dhabtahay aragtidaasi Sheekhu Somali waa u geesi.
Laakiin, xadaarada cusub ee maanta aduunka ka jirta geesi ma aha ruuxa dagaalyahanka ah ama afka waranka ah leh ee waa ruux maskax iyo caqli isticmaala dhamaystirana ujeedadiisa dhibaato la,aan.
Sheekh Ibraahin Maxamed Xuseen, waxaa uu buuxiyey labada fikir ee isbarbar socda ee loo yaqaan geesinimada oo kala ah “dagaal iyo nabad.”
Dib ugu noqon mayno taariikhda Sheekha iyo maraxaladii uu ka soo maray Jabhadnimada, laakiin waxaan in yar ka odhanaynaa gabalka Ogaden.
Gabalka Ogaden oo leh magacyo badan, oo siyaasadeed ayaan magaciisa dhabta ah aan la dhaafin karin Ogaden.
Dhab ahaan marka aan taariikhda la geesmarina Imaatinka Ethiopia ee gabalku waxaa uu la mid yahay gabalada Somaliyeed ee shanta lagu sheego.
Gabalka Ogaden dadka degan waa dad Somali ah, samaan iyo xumaana la wadaaga ummada Somalida ah ee ku nool geeska Afrika.
Gabalka Ogaden, waxaa dadka iyo dalkaba daashaday oo aduunka ka reebay dagaal iyo colaad, walina wax beel mooyee lama hayo wanaag.
Dagaalada ka dhaca gabalka waxaa laga soo abaabuli jiray, dalka Somaliya, marka laga reebo kan laga heshiiyey oo ay kaligood abuureen dhalinyaro u dhalatay gabalka. Kuwaas oo dagaal iyo aan jabhad samayno mooyee aan isweydiin aan nabad wax ku doono.
Jabhadaha ONLF iyo Somali galbeed, ayaa waxay dagaal kula jireen xukuumada Ethiopia 17kii sano ee ugu dambeeyey iyaga oo aan wax taageero ah ka helaynin dalkii hore u taageeri jiray.
51 sano ka dib, waxaa icraabay colaada iyo dagaalada aan dhamaadka lahayn ee ka jira gabalka Ogaden Sheekh Ibraahin Maxamed Xuseen, wuxuuna helay xal aan hore loogu fikirin gabalka, oo la mid ah kii uu qaatay madaxweynihii Masar Anwar sadaat sanadkii 1979.
Sheekh Ibrahin, go,aanka geesinimada ah ee uu qaatay, wuxuu keenay isbadal neecaw nabadeed, neef ku dhaganayd waxay ka soo saartay dadka gabalka u dhashay.
Sheekh Ibrahin, wuxuu mudan yahay abaal marin iyo aqoonsi isbadalka siyaasadeed ee ka dhacay degaanka Somalida Ethiopia.
Abaal marinta uu maanta siiyey Madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia, waa mid dhab ah.
Dhamaystirka nabada iyo nolosha uu horseeday Sheekh Ibrahin, waxay u taal dawlada Ethiopia iyo dadweynaha gabalka u dhashay.
Abaartii Ugu Xumayd 60 Sano, oo ku Dhufatay Geeska Afrika
45 Wariye ah oo Tababar Looga Furay Jijiga